Umgolo nomphumela omubi emnothweni nemvelo - Bayede News
Umgolo nomphumela omubi emnothweni nemvelo
IVANGELI elishunyayelwa nsuku zaphuma lokubuyiselwa komhlaba kwaboHlanga nokuba abasezindaweni zaMakhosi bahlomule ngemisebenzi bekuzo liseyiphupho kubantu bakwaFakazi eLovu indawo yabo esiphenduke imayini yabomdabu baseNdiya abamba isihlabathi.Sekuneminyaka kumbiwa isihlabathi kule ndawo osekuze kwaba nezigameko zokuminza kwezingane uma linile ngoba imigodi imbiwa ishiywe kanjalo. Kusukela ngowezi-2001 umphakathi uzama ukuxoxisana nabanikazi bezinkampani zabomdabu baseNdiya abahweba ngesihlabathi abasimba kule ndawo, kodwa kube nhlanga zimuka nomoya.
Umphakathi ubikele elaboHlanga ukuthi abanikazi balezi zinkampani bebeqhosha ngokubavezela amaphepha abagunyazayo ukuba bambe isihlabathi kule ndawo avela kwaboMnyango Wezokumbiwa. Okunye abebekusho ukuthi basuke benesivumelwano nezinye zezinduna ukuba basebenze lo mhlaba. Ngaphandle kwesihlabathi le ndawo inothe ngenkwali esetshenziswa kakhulu uma kwakhiwa umgwaqo.
Labo somabhizinisi bamba isihlabathi basidayisele izinkampani ezinkulu ezenza usimende, basidayise ezitolo ezidayisa impahla yokwakha nezinkampani ezinamathenda okwakha izindlu zomxhaso. NgoMsombuluko amasosha oMkhonto Wesizwe (MK) eNingizimu agasele kule ndawo eyovala zonke izimayini ezihweba kule ndawo ngesihlabathi nenkwali. Lolu daba luvuka ogqokweni kwazise iBAYEDE yalushicilela mhla zili-12 kuNhlaba ngowezi-2016 nalapho osomabhizinisi bendawo babekhala ngokucindezelwa ngosomabhizinisi baseNdiya ngokusebenza emphakathini wabo bebavalele ngaphandle bona bengaboHlanga. Njengamanje umfula iLovu umigodigodi ngoba abalezinkampani bafike bambe inhlabathi maqede badlulele kwenye ingxenye nakhona benze okufanayo bashiye kanjalo.
ElaboHlanga lihambele kule ndawo ukuyobheka isimo emuva kokuthintwa abeMK. Phambilini kuke kwaba khona izigameko zokukhalakathela kwemfuyo kule migodi, ikakhulukazi izinkomo uma ziyophuza amanzi, kuminze nezingane. Le migodi isuke igujwe ngemishini okwenza ishone kakhulu bese kuthenjelwa ekutheni kune izulu ukuze isihlabathi esisuke semuka ngokugcwala komfula sifike siyigqibe.
Noma kunjalo ukuphepha kwemfuyo kusuke kungaqinisekisiwe ngoba uma inkomo ihamba phezu kwalapho kusuke kugujwe khona kuyawohloka bese iyabisha ingabe isakwazi ukutakuleka ngenxa kokujula kwawo. Lesi simo sokumbiwa kwesihlabathi kulo mphakathi sekudale omkhulu umonakalo njengoba sekuze kwaphoqa ukuthi kunwetshwe imigwaqo kanye naleyo enqamula emfuleni okudala ukuthi kunwebeke nalapho bekuhamba khona amanzi. Lokhu kuthwalisa kanzima umphakathi uma sekumele uwelele ngaphesheya ngoba amanzi asabalala ibanga elikhulu nezimoto azikwazi ukuwela.
Lokhu kuze kuhlukumeze nezingane zesikole ezifunda ngaphesheya komfula. Ngenkathi elaboHlanga litheleka kule ndawo amaloli esihlabathi abephuma engena, kuduma imishini egubhayo abanikazi bezinkampani bekanise indawo yonke bebheke ukusebenza njengokwejwayelekile. Kulo msebenzi kugcwele abomdabu waseNdiya , yibo abahweba kakhulu. AboHlanga basasilele emuva njengoba bebengabonwa nangalukhalo. Abebekhona boHlanga bangabashayeli bamaloli abanye bayalayisha, abanye bashayela imishini okumbiwa ngayo kuphinde kulayishwe ngayo isihlabathi emalolini.
Ophenyweni lo Zul’azayithole kuvele ukuthi kubasebenzi abahlela isihlabathi uma sesilayishiwe bahola iR150, kuthi oshayela umshini ahole ama-R400, bese oshayelayo ahole ama-R350. Ukugasela kwabe MK kulezi zindawo zokusebenza kushubise isimo njengoba bagasele kungazelele muntu. Ngesikhathi kuqala ukukhulunywa lolu daba ngowezi- 2001 kwagcina sekusungulwa inhlangano eyayibizwa ngokuthi Ubumbano Logistics yosomabhizinisi boHlanga. NgoMsombuluko amasosha atheleke amisa ukusebenza abe esecela umhlangano ophuthumayo kulabo abebekhona, abe esebazisa ukuthi aze la ukuzobuyisa umhlaba waboHlanga kubo njengoba usetshenziswa ngabantu abazicebisa bona.
UMnu uKK Gcaba othe usekomidini elibhekelele ukusebenza kwalezi nkampani kule ndawo ehambisana noMnu uHlongwa (elingatholakalanga igama lakhe ngoba engafunanga ukuvela kulolu daba) yibo abathe bangabaxhumanisi bomphakathi nezinkampani ezimba kule ndawo. Kuke kwashuba isimo abeMK bengayizwa indaba yalaba abathi basekomidini abebebonakala bezwelana nezinkampani zabambayo. UGcaba ukhale ngokuthi amasosha oMkhonto angene ngesinxele. Uthe bona njengoba besebenza la kumele bathintane nezinhlaka ezehlukene ezengamele umphakathi, okuyinduna, amakhosi kanye naleli komidi elixhumanisa umphakathi nalezi zinkampani ezihweba kule ndawo. Uqhube ngokuthi lolu daba alulusha, kwake kwenzeka phambilini kwafika osomabhizinisi bezama ukuzoxosha la maNdiya kodwa behluleka njengoba kulokhu sekutheleka amasosha.
Kube neziwombe ezinzima kwaze kwabanjwana ngezihluthu elinye lamasosha oMkhonto ligxeka uGcaba lithi usetshenziswa amaNdiya ukudayisa umhlaba wokhokho babo nomhlaba wezwe aboboshelwa lona baya nasekudingisweni kwachitheka negazi. Kuke kwakhonjwana ngeminwe kwaphoqa ukuthi kukhuzwe ngoba bese kunamagama alumelayo.
USihlalo weMKVA eNingizimu yesiFundazwe uMnu uSbonelo Maphumulo uthe lokhu abakwenzayo bakwenza ngenhloso yokulandelela kulokho okushiwo uHulumeni ukuthi sekuyisikhathi sokubuyisela umhlaba kubantu. “Sikhathele amaNdiya angena emiphakathini yethu ezohweba ashiye abantu boHlanga bencela izithupha. Sifuna aphume aphele kulezi zindawo kusale aboHlanga bakwazi ukusebenza baphilise imindeni yabo ngoba sesiside isikhathi becindezelekile.”
ElaboHlanga lixhumana neNkosi yesizwe sakwaToyana iNkosi uNhlosoyesizwe Hlengwa ikuqinisekisile ukuthi lolu daba iyalwazi. “Izigodi ezithintekile kulokhu kumbiwa kwesihlabathi yindawo yakwaFakazi nase Nkwali. Nginomhlangano ozoba khona kulo leli sonto lapho okuzobe sekuthathwa isinqumo mayelana nalezi zinkampani ezihweba la. Zikhona ezisebenza ngokusemthethweni nezinye ezingaziwa.”
INkosi uHlengwa yethembise ukuthi isazoqoqa zonke izinduna ithole kabanzi mayelana nalokhu kusebenza kwalezi zinkampani kule ndawo yenkosi yabe isithi akuyona ekhipha izimvume zokusebenza kepha uMnyango wezoKumbiwa phansi. ElaboHlanga lithole ukuthi emhlanganweni wangoLwesibili kuvunyelwane ngokuthi kume nse ukusebenza kwalezi zabomdabu waseNdiya kuqhubeke ukusebenza lezi zaboHlanga.
Bayede News Jan 5, 2020